Festivals နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/4)
Many types of matsuri (festivals) are held throughout all four seasons in every corner of Japan, although summer probably has the most. There is an incredibly rich assortment of festivals here, from ones where everyone comes together to dance to wild and boisterous ones celebrated with fire. Find the festival that fits your dream journey!
လူပေါင်း ၃ သိန်း ၁ သောင်းလောက် လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး ဘိဝခိုရေကန်ဘေးမှာ ကျင်းပတဲ့ မီးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ ခရိုင်အတွင်းပြင်မှ ဝေဖန်အကဲဖြတ်...
ပွဲတော်ကျင်းပသည့်အချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှ အမျိုးမျိုးသောဆုတောင်းများရှိလာသည့်အတွက် နောက်နေ့ တွင် ဂေါ်ဇန်းနော့အိုခုရိဘိ၊ ခီရောမိဇုဒဲရာတွ...
ခဂ၏ တောင် ရှိရောယာမတောင်ပေါ်တွင် ပူဇော်ပသထားသော ခုခုရိနတ်သမီးအား မြင့်မြတ်စွာပူဇော်ပသသော ဘုရားကျောင်း။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ၉၄၇ မှ ၉၅၇ ခု...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူနှစ်သန်းကို ကျော်လွန်သော ဧည့်သည့်များလာရောက်လည်ပတ်ကြသော၊ ဂျပန်တွင် နံပါတ်တစ် တနဘတပွဲတော်။ အရောင်အသွေးစုံလင်သော ဂျပန်စ...
ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့ မှ တစ်လကြာကျင်းပသော ယာဆကဘုရားကျောင်း၏ပွဲတော်ဖြစ်ပြီး ရောဂါပျောက်ကင်းသက်သာမှုများကို ဆုတောင်းကြပါသည်။ နွေရာသီကိုကြေငြာသော...
နရပန်းခြံ၏အရှေ့ ဘက်စွန်းတွင်တည်ရှိသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၄၂ မီတာရှိသော တောင်။ ပြေပြစ်သောတောင်ကုန်းကိုဖုံးအုပ်ထားသော မြက်ခင်းသည် နော...